भाग्यमानी व्यक्तिको हातमा मात्रै हुन्छ यस्तो चिह्न, जानी राखौं – onlinedarpan:
Posted on October 11, 2018 October 11, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 94 Views
हस्तरेखा शास्त्रद्वारा भविष्य जान्नका लागि हत्केलामा भएका रेखाको अलावा औंलाको बनावटको पनि विशेष महत्व हुन्छ । यसको अतिरिक्त हत्केलामा हुने केही विशेष चिह्नले पनि तपाईको जीवनबारे धेरै कुरा बताउँछन् ।
यसकारण राम्रो र नराम्रो रेखाको आधारमा मात्र कसैको बारेमा केही भन्नु पूर्णरुपमा सत्ह हुन सक्दैन ।
हत्केलामा शंख, चक्र, त्रिशूल, कमल आदि चिह्न हुनु धेरै शुभ मानिन्छ । यस्ता मानिसहरु भगवानबाट कृपा पाएको पात्रका रुपमा चिनिन्छन् र जीवनमा अरुभन्दा अलग्गै हुन्छन् । यस्ता मानिसले अरुको भन्दा धेरै सफलता हासिल गर्छन् । त्यो पनि कम मेहनत मै ।
यो आलेखमा त्यो चिह्नबारे चर्चा गरिएको छ, जो धेरै कम मानिसको हातमा हुन्छ । र धेरै कम मानिस मात्रै यो चिह्नका बारेमा जान्दछन् ।
यो हो विष्णु चिह्न !
हत्केलामा हृदय रेखा जब गुरु पर्वतमा पुगेर दुई भागमा बाँडिन्छ, जिसको एक सिरा माथिल्लोतर्फ तथा मध्यम औलाको बीच भएर जान्छ । तल गुरु पर्वतको तर्फ गइरहेको हुन्छ।
यसमा ड्र गर्यो भने अंग्रेजी ‘बी’ जस्तो देखिने एक चिह्न बन्छ । यसैलाई भगवान विष्णुको चिह्न मानिन्छ । यसलाई नै विष्णु रेखा भनिन्छ ।
विष्णु रेखाको महत्व
विष्णु चिह्न जसको हातमा हुन्छ, उसलाई भगवानबाट विशेष कृपा पाएको व्यक्ति मानिन्छ । तर यो हैन कि यस्ता व्यक्तिले जीवनमा केही पनि नगरी सबैथोक पाउँछन् । यदि यस्ता व्यक्तिले राम्रो काम गरे भने अवश्य सफलता मिल्छ । यस्ता व्यक्तिले कुनै गलत काम गरे भने पनि त्यसको नराम्रो नतिजा पनि तत्कालै पाइहाल्छन् ।
राम्रो काम गर्दा यस्ता व्यक्तिले अरुको तुलनामा धेरै बढी प्रगति गर्न सक्छन् । राम्रो काम गर्दा आइपर्ने कुनै पनि चुनौतीलाई यस्ता व्यक्तिले सजिलै पार गर्न सक्छन् ।
यस्ता व्यक्तिका विरोधीले पनि यीनिहरुलाई सजिलै हराउन सक्दैनन् । यीनिहरुले समाजमा पनि प्रतिस्ठा पाउँछन् ।
ShareTweetPin27sharesकहिलेकाँही हाम्रो जीवनमा यस्तो हुन्छ कि हामी जीवनमा आफ्नो लागि एकदमै खुसी हुन्छौं । खुसीको बेला हामीले धेरै कुरा भुलिरहेका हुन्छौं, जसले जीवनमा दिर्घकालीन असर पुर्‍याउँछ । चाणक्य नीतिमा यस्ता धेरै जीवनपयोगी सन्दर्भहरु उल्लेख गरिएका छन् । यहाँ भने जवान महिलाले जवानीमा कहिल्यै भुल्न नहुने कुराहरुबारे उल्लेख गरिनेछ । १. शिक्षा सबैभन्दा असल मित्र हो विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
ShareTweetPin8sharesएजेन्सी । हाम्रो समाजमा हरेकका घर घरमा तुलसीको मठ र बिरुवा हुने गर्दछ । तर के तपाईलाई थाहा छ तमाम गुणले भरिएको तुलसीको बिरुवा कुन दिशामा हुनुपर्दछ ? सहि दिशामा तुलसी रोप्नाले यसले शुभ फल दिन्छ। तर गलत ठाउँमा रोप्नाले दोष पनि लाग्न सक्छ। वास्तु अनुसार यस दिशामा रोप्नुहोस् तुलसी तुलसीको बिरुवा भूलेर पनि दक्षिण विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
ShareTweetPin184sharesगाडीमा यात्रा गरिरहेकाहरु होस् वा मर्निङ वाक गरिरहेकाहरु, कुनै कामधन्दामा लागिरहेकाहरु होस् वा कलेज धाइरहेकाहरु । धेरैजसो कानमा ईयरफोन ठोसेर एकसूरमा केही सुनिरहेका हुन्छन् । कतिपय त ईयरफोन लगाएर सवारीसाधन पनि हाँकिरहेका हुन्छन् । यसको कारणले दिनप्रतिदिन दुर्घटना भइरहेका छन् । सवारी चलाउँदा ईयरफोनको प्रयोग गर्नेहरु आफुमात्र दुर्घटनाको जोखिममा छैन, उनीहरुको कारण अरुले यात्रु, बटुवा विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
जेठो सन्तान अन्यभन्दा धेरै फूर्तिलो र बौद्धिक किन हुन्छ ?